Ny toerana tsara haleha ho an’ny Global Voices andro mafana: tolakandro ao amin’ny Jardin des Plantes any Paris · Global Voices teny Malagasy
Ny toerana tsara haleha ho an'ny Global Voices andro mafana: tolakandro ao amin'ny Jardin des Plantes any Paris
Voadika ny 08 Mey 2018 5:05 GMT
Jardin des Plantes – Sary tao amin'ny Mozean'ny Tantara Natoraly
(Marihina fa tamin'ny 30 Aogositra 2015 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Maro amin'ireo mpikambana Global Voices miisa 800 manerana an'izao tontolo izao no mitsiriritra ireo ekipan'ny Global Voices ao Paris. Mandrisika dia mandrisika anao ny Global Voices ao Paris hitsidika ny faritry ny Zaridainan'ny Zavamaniry ao Paris ( Jardin des Plantes ) raha mitsidika an'i Paris amin'ny asara (andro mafana) ianao.
Voalohany, ny zaridaina
Na dia tsy lamaody intsony aza ny mandeha amin'ny Zaridainan'ny Zavamaniry sy ny faritra manodidina azy, dia vao haingana izy no lasa toeran'ny fahitana zava-baovao indray. Ity Zaridaina ity no tranainy indrindra amin'ny zaridaina lehibe ao Paris, ary zaridainan'ny raokandron'ny mpanjaka izy io tany am-boalohany. Nanome lanja lehibe azy kosa ny Revolisiona Frantsay, fa tamin'ny fotoan'androny no nanaovana azy ho “tempolin'ny siansa”, fa sady nitana ny fiamboniany [borizano] izy no manana ny fanintonan'ny avy any amin'ny faritany.
Tony ilay Zaridaina, feno voninkazo, ary tena (azo heverina ihany koa) mitondra fanabeazana. Raha tokony ho toerana fialantsasatra ny manodidina eo amin'ny ahitra talaky masoandro, dia izany no toerana iray natao handehanana eny amin'ny kirihitra lehibe eo ambany lozoky ny ravinkazo matsiro. Atrikasa isankarazany sy fampahafantarana maro nanomboka tamin'ny haizavamaniry ka hatramin'ny sary hosodokorano no notontosaina ao an-toerana, ary mirakitra ireo zava-mahatalanjona marobe ara-tantara ihany koa ny Zaridaina toy ny toerana fialofana ho an'ny zavamaniry ary ny trano fampirantiana natokana ho an'ny fivoaran'ny zava-manan'aina (anisan'izany ny dinôzaoro mazava ho azy). Tsy maintsy hitanao ao ihany koa ny valan-javaboahary ho an'ny biby fiompy an-trano (miaraka na tsy miaraka amin'ny ankizy), izay nampisehoana voalohany ny zirafy tany Frantsa tamin'ny taona 1827 (na dia tsy tsara loatra aza ny mampatsiahy ny olona fa nohanina nandritra ny Fahirano an'i Paris tamin'ny taona 1870 ny biby tao amin'ny valan-javaboary, anisan'izany ny elefanta) .
Ny fampiratiana sy ny fandaharam-potoan'ny hetsika tao amin'ny Zaridainan'ny Zavamaniry
Faharoa, ny Moskea Lehibe ao Paris
Ho an'ireo Pariziana, mitovy amin'ny vanim-potoan'ny dite ny Zaridainan'ny Zavamaniry. Izany dia natao teo akaikin'ny Moskea Lehibe tao amin'ny Zaridaina tao Paris, ary nanokafana ilay moskea tamin'ny taona 1926. Tao amin'ny lavarangana mahafinaritry ny Moskea no nanaovana izany ary ahitana ireo vorona mitsaingoka ny zava-drehetra eo am-bilianao raha iny mankafy ny fotoan'ny fisotroana dite miaraka amin'ny mofomamy iny ianao.
Fahatelo, ny lavarangana sy ny toerana
Dimy minitra miala eo amin'ny Zaridaina sy ny Moskea Lehibe no ahitana ny foiben'ireo mpikambana ao amin'ny Global Voices any Paris, izay toeram-pisakafoana sady fisotroana kafe Verse Toujours. Ahitana ny toerana malalaka sady mahafinaritra izany izay tsara indrindra amin'ny faran'ny tolakandro mba hanararaotana ny fibaliakan'ny masoandro raha mitady ny mahafinaritra ianao .
Noana? Eo akaiky eo ny Comptoir des arts (nankasitrahan'ny ekipan'ny Global Voices taorian'ny fifaninana fankalazana tsingerintaona nahaterahana) raha misy ambim-bola kely any aminao . Ny Foyer Vietnam, ‘anisan'i Vietnam ao afovoan'i Paris’ izay mora kokoa sy mifanaraka kokoa amin'ny eritreritry ny Global Voices dia sady fisakafoanana (tsinjovy ny hilahatra), no fikambanana no trano fampirantiana. Ary ho an'ny mofomamy Syriana, manasa anao ho any amin'ny Petites merveilles de Damas .
12 ora izayAmerika Latina